(Pitahaya) फल "ड्रैगन को हृदय"। त्यहाँ pitaya रूपमा
अब, जो केवल विदेशी फल हाम्रो स्टोर को समतल फेला गर्न सकिँदैन वैश्वीकरण को युग मा! सबैभन्दा उपस्थिति मा अनौठो - भियतनाम देखि एक फल, छ "ड्रैगन को हृदय।" उहाँले रातो वा बैजनी छाला लुकाउँछ जो पछि एक हेज हग, हरियो सुई, जस्तै Bristling, फल नाजुक र सुगन्धित शरीर संग fraught छ। यो पोस्ता संग घिउ क्रीम जस्तो - त्यसैले thickly सानो कालो बीउ को भित्र सम्पूर्ण भ्रूण थोप्लो। र "ड्रागन को हृदय" स्वाद के छ? र तपाईं कसरी खान किन? यो र अन्य धेरै कुराहरूमा तपाईं यो लेख सिक्न।
अब फल "ड्रैगन को हृदय" छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद मुख्य रूप दक्षिण-पूर्वी एसियामा ट्रपिकल देशका आयात गरिन्छ, बोट को जन्म ठाउ केन्द्रीय र ल्याटिन अमेरिका छ। पुरातन Aztecs लामो तिनीहरूलाई कल "pitaayya", खाना लागि फल प्रयोग गरेका छन्। तसर्थ, फल मा, त्यहाँ अन्य नाम थिए। यो, "ड्रागन राम्रो आँखा", "आशुक्रोधी नासपाती" "pittahayey" भनिन्छ। अंग्रेजहरु उसलाई ड्रागन फल रूपमा थाहा छ, तर थाईल्याण्ड मा "keumangkon" भनिन्छ। तर कसरी कुनै पनि मान्छे को नाम को धेरै यो फल सम्मानित थियो, र यो Hylocereus सख्त वैज्ञानिक वर्गीकरण रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण: वास्तवमा pitahaya - को फल हो यो सिउँडी! हो, मात्र सुखा मरुभूमिमा बढ्दै र आर्द्र ट्रपिकल जंगल छैन lianoobraznye। Pittahayya क्रप, एक वर्ष चार छ गर्न पटक पैदावार यसको फल यातायात सहनु। बोट राम्रो यस्तो जलवायु छाँटकाँट, र यति अब श्रीलंका, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, थाइल्याण्ड व्यावसायिक खेती। इजरायल, अष्ट्रेलिया, जापान तिनीहरूलाई बढ्न।
"ड्रैगन को हृदय" को फल के छ
यो सानो फल (एक पाउन्ड pyadidesyati देखि साधारण सय एक ग्राम)। संयंत्र तीन प्रकारका छन्। ती दुई सेतो मज्जा छ। यो एक पहेंलो (Hylocereus megalanthus) र रातो (Hylocereus undatus) pitahaya, फोटो तपाईं देख्न छ। तेस्रो प्रकारको - Hylocereus costaricensis - kostorikansky, विशेष। फल को शरीर, साथै छाला रगतको रंग मा चित्रित छ। "ड्रैगन को हृदय।" - शायद यस प्रकारको र फल को एक sonorous नाम दिए फल को स्वाद रंग प्रभावित गर्दैन। पहेंलो pittahayya एक सानो थप लागत, तर यो शायद एशिया उत्पादन गरिन्छ मात्र किनभने। एक शरीर रंग पात आकारको outgrowths द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन। तिनीहरूले हरियो हो भने, फल भित्र बीउ संग सेतो सस हुनेछ। पातहरु pinkish हो भने, फल को शरीर रातो छ।
के खाएको छ
pitahaya सिउँडी Lianopodobny, फोटो तपाईं धेरै सुन्दर फूल हेर्न सक्नुहुन्छ। ठूलो सेतो तन्तु मात्र राति प्रकट र बलियो, सुखद सुगन्ध exude छन्। यस सन्दर्भमा, फूल चिया (जास्मिन रूपमा) को एक स्वादिष्ट रूपमा प्रयोग गरिन्छ। Ovary चालीस दिन पछि देखिन्छ। मृगौला सिउँडी ताजा तरकारी रूपमा खाइन्छ। फल क्रप फूल pores दुई महिना पछि फसल काट्न सकिन्छ। निस्सन्देह, फल मात्र यसको कच्चा फारम प्रयोग गरिएको छ। Pittahayyu मिठाई लागि छुट्टै पकवान रूपमा पेश गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले पनि फल सलाद मा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। को मज्जा एक puree मा pounded छ, स्वादिष्ट कागती संग जोडियो। बीउ धेरै उपयोगी छन्, तर तिनीहरूलाई शरीर द्वारा assimilate लागि क्रममा तिनीहरूले चपाउनु गर्न आवश्यक छ। अझै Cieza डी लियोन, पहिलो युरोपेली आफ्नो "पेरु को क्रनिकल" (सोह्रौं शताब्दीमा) मा pittahayyu वर्णन गर्ने, यो फल को एक रोचक सम्पत्ति उल्लेख गरिएको छ। जो छोटो समय को लागि pitaya, मूत्र र मलको कम्तीमा पनि एक सानो फल खाए मानिस, रगत को रंग मा चित्रित छन्। यो घटना भनिन्छ psevdogematuriey र शरीर कुनै हानि, यो सहन गर्दैन, त्यसैले चिन्ता छैन।
"ड्रागन हृदय" को प्रयोग
Pitaya - फल, फलाम, क्याल्सियम र फस्फोरस मा धनी। यो पनि भिटामिन बी 1, बी 2, बी 3, ई, सी र पीपी को धेरै छन्। Pittahayya नब्बे प्रतिशत पानी। बोसो, polyunsaturated र एउटा सानो रकममा समावेश छन्। सामान्य मा, एक फल आहार। यो एक विशेष मिठाई छैन, त्यसैले यो सुरक्षित मधुमेह खपत गर्न सकिन्छ। फल, कोलेस्ट्रल lowers प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो, को जठरांत्रिय पर्चा को normalization बढवा दिन्छ। सौम्य रक्तचाप lowers रूपमा यो hypertensive विरामीहरु लागि उपयोगी छ। एंटीओक्सिडेंट, क्यान्सर कारण छ कि मुक्त कण को गठन रोक्छ जो - साथै, pittahayya अत्यावश्यक पदार्थ comprises। तर सावधानीपूर्वक pittahayyu रोगग्रस्त अन्तस्करणले संग मान्छे को लागि प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
एक पाकेको फल कसरी चयन गर्न
सामान्यतया फल "ड्रैगन को हृदय" एक चिल्लो छाला पत्तेदार growths संग डटेड, रातो छ। म के भित्र लुकेको छ कसरी थाहा छ? फल पाकेको छ? यसलाई आफ्नो औंला संग धक्का द्वारा निर्धारण गर्न सजिलो छ। फल नरम, सुखद पानीका मुहानहरू, त्यसैले मधुर छ भने। फल स्वाद धेरै निराशाजनक को पहिलो। उहाँले एक सानो पानी जस्तो, wishy-washy, एक सानो मीठो थियो। साधारण को धनी स्वाद accustomed भएकाहरूले, यो बुझ्न छैन। "बीउ संग मिठो kiwi", कोमल ताजा मलाईदार मज्जा को एक अर्थमा आउँछ - यो छ कि पहिलो प्रभावको: तर pittahayyu "raskushat" गर्नुपर्छ। pittahayi mouthwatering देखि सुगन्ध। तर उहाँले यसलाई भ्रूण गर्मी आवश्यक छ पलायन। यो सबै बस पाकेको pitaya बारेमा। फल प्रारम्भिक निराश छ भने, यो एकदम स्वाद नभएको हुनेछ। यदि रूपमा disclosed peony पत्रदल - तर पाकेको फल हात सफा गर्न सजिलो छ।
त्यहाँ pitaya रूपमा
सामान्यतया फल राम्रो सेवा छ। आधा मा कटौती र एक मिठाई चम्चा एक प्लेट मा सेवा गरे। को हड्डी बाट शरीर र वेवास्ता गर्ने आशुक्रोधी बोक्रा खान टाढा। त्यहाँ सेवा अर्को तरिका हो। साथै, फल ठाडो आधा कटौती, तर उहाँलाई फल चक्कु, एक चम्चा खुवाउनुभयो छ। स्लाइस - यो मामला मा रूपमा सानो खरबुजा वा खरबुजा कटौती pittahayyu। "ड्रागन हृदय", फल chilled सेवा छ evaporated अद्भुत स्वाद बच्न। तथापि, यो ज्यादा र pitaya स्थिर छैन। यसको स्वाद र यति धेरै expressive छैन। यो hypothermia फलस्वरूप नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, यो अन्य फल वा उज्ज्वल, पूर्ण-bodied स्वाद छ कि खाद्य पदार्थ संग संयोजन गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूमध्ये "नष्ट" pittahayya, र तपाईं wrongly यसलाई कदर छैन। रातो मज्जा संग फल अझ उच्चारण स्वाद छ, तर सेतो संग - थप परिष्कृत। साथै, उनको pitaya को घर घर रक्सी, बरकरार, जाम बनाउन। कागती आइसक्रिम संग Drakensberg मसले फल सजाउनु गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यस Aztecs ढाकिएको फल धेरै मिथक "ड्रैगन को हृदय"। तिनीहरूले कुनै तरिका को अनौठो नाम pitaayi सबै व्याख्या छन्। यसलाई एक पटक Yucatan ड्रेगन Inhabited कि विश्वास छ। तिनीहरूले गाउँमा आक्रमण र हानि को धेरै ल्याए। धेरै योद्धाहरूले पनि ड्रेगन संग युद्धमा गए। सबैभन्दा शक्तिशाली र दुष्ट - र त्यहाँ एउटा मात्र थियो। उहाँले आगोमा नायक मा spat, तर Aztecs -, र एक पतित सैनिक सट्टा जिद्दी मान्छे अर्को आए। अन्तमा, ड्रागन आगो पहिले नै गएका थिए कि बिन्दु गर्न निकास थियो। उहाँले आफ्नो हृदय बाहिर spat र मृत्यु भयो। बाटो गरेर, को बोटहरू को stems देखि, सिउँडी चिकित्सा गरे। यो हृदय प्रणाली बढावा।
म कच्चा ससेज खान सक्नुहुन्छ? sausages कसरी खाना पकाउनु?
बारुला मह अवस्थित गर्छन्?
Konin: लाभ वा हानि यसको प्रयोगबाट? horsemeat देखि पकाउने सर्तहरू र व्यञ्जनहरु
सोडियम स्याकरिन: लाभ र हानि
घरेलू टिप: कति ऐंसेलु एक लीटर जार मा ग्राम?
हड्डी अभोकाडो: आवेदन र उपयोगी गुणहरू
यो मह सुत्केरी आमाले गर्न सम्भव छ? हामी सिक्न!
अगस्ट 31 मा ओर्थोडक्स छुट्टै के हो? चर्चको छुट्टियाँ अगस्त 31 मा
नयाँ वर्ष को लागि एक इच्छा कसरी बनाउने
तपाईं स्याउ बाहिर के गर्न सक्छौं? समर्थित र मसालेदार स्याउ
30 वर्ष पुरानो महिला Jubilee। परिदृश्य, को दल
कसरी निजी घर को तल्ला ढाक्नु गर्न: सिफारिसहरू
Sukhodolskoye ताल। मनोरंजन माछा मार्ने
बुनाई विभिन्न प्रकारका। लूपहरूको को प्रकार जब बुनाई सुई
संग्रहालय Arbat मा: सबै भन्दा रोचक र असामान्य को सूची
पक्रने walleye प्रत्यक्ष चारा - एक रोमाञ्चक अनुभव